Galmada badan caafimaadka wax ma u dhintaa? | Raganimo University
Galmada badan caafimaadka wax ma u dhintaa?
June 13, 20192 minutes
Inkastoo inta badan dhaqaatiirta iyo qubarada caafimaadka ay aaminsanyihiin in galmadu ay u fiicantahay caafimaadka, oo ay hoos u dhigto cadaadiska, walwalka isla markaana ay madaxa u dajiso lamaanaha, ayaa hadana waxaa la isku raacsanyahay in wax kasta oo xadka dhaafa in aysan wanaagsanayn.
Waxaa la sheegay in tirada galmada ugu wanaagsan ay tahay isbuucii 2 goor ama 1 mar. Way jiraan lamaane isku galmoodo dhowr jeer isbuucii, qaasatan bilowga hore ee xiriirka balse marka ay lamaanuhu muddo wada socdaan ama ay caruur isku dhalaan waxaa dhacda in ay hoos u dhaco heerka galmadooda.
Inkastoo aysan jirin tiro la isku raacsanyahay oo haddii laga badsado ay galmadu caafimaadka wax u dhamayso, hadana waxaa la ogyahay in qaasatan dumarka uu xanuun jirka ah u keeni karo galmada badan. Xubinta galmada ee dumarka waa mid u baahan qoyaan marka loo galmoonayo. Marka ay galmadu badato waxaa dhacda in qoyaankaas uusan ku filnayn. Iyadoo xitaa lamaanaha qaar ay isticimaalaan kareemo iwm.
Ragga xitaa ayaa dhacda in guska uu xanuuno ama ay kaadidu dhibto galmada badan ka dib. Sidoo kale ragga qaar waxaa ku dhacda in ay kacsan waayaan marka ay galmada badsadaan, oo xitaa iyaga oo doonaya uusan guska u kaceyn. Ragga qaar ee da'ooda ka yartahay 30 sano waxay ku qaadataa daqiiqado in ay kacsadaan galmada ka dib, halka ragga ka weyn 30 sano ku qaadan karto saacado ama maalmo in aysan kacsan. Dumarku iyagu cilidaan ma qabaan oo horay ayay ka kacsan karaan marka ay biyo-baxaan ka dib.
Arinta la isku raacsanyahay ee dhibaatada galmada badan ayaa ah mid la xiriirta nolosha. Haddii aad tahay qof si joogto ah uga fikiraya galmada oo markasta raadinaya. Oo taasi ay keenayso in aad ka mashquusho waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha sida shaqada, cibaadada, cuntada iwm taasi waa galmada oo balwad noqotay caafimaadkana uma fiicna. Waliba waxaa talo ah in aad dhaqtar la kulanto si aad u hesho talo ku saabsan arintaan.